Sida Loo Doorto Majarafad Snow a - Shiinaha Richina
Sida Loo Doorto Majarafad Snow a
A Majarafad Snow loogu talagalay isticmaalka backcountry xamili karaan noocyo kala duwan oo hawlaha, laakiin samatabbixinta gebiyo si fudud waa mid ka mid ah ugu maarmaan. article Tani waxay bixisaa talooyin isticmaalka baraf-majarafad iyo talooyin ku saabsan sida si ay u dukaameystaan ​​for mid.
Wuxuu adeegsadaa for a Snow Majarafad Backcountry
Sababta ugu muhiimsan si ay u fuliyaan mid ka mid ah waa ay dhacdo gebiyo. Haddii aad ku qalabaysan transceivers gebiyo iyo probes laakiin aanad haysan si ay u qodo dhibbanaha, aad tahay xaalad aad u xun.
Qof kasta oo koox, ma ahan oo keliya 1 ama 2, tegaya backcountry qaboobaha waa in majarafad ah. ma garan kartid, kuwaas oo aad qaban doona gebiyo, oo aad rabto in aad loo hubiyo in dhammaan majarafadihii heli karo aan lagu aasay.
Majarafadihii ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu qodo godad badan lagu ogaanayo xaaladda snowpack backcountry. Inta Badan oo dhan safar, xubno ka mid ah xisbiga waa qodaan barafka si ay u arkaan waxa dhacaya underfoot. god baraf A kuu ogolaanayaa inaad si loo ogaado haddii layers daciif ka jiraan kuwaasi sii deyn lahaa iyo bilaabaan in ay simbiriirixan. Wixii dheeraad ah oo ku saabsan daraasadda snowpack, arki Advice Richina Ltd.
A isticmaalka more caadi of majarafadihii barafka waa in derderkii soo baxay meel heer teendhadaada waayo, markii kaambada baraf ama fuulitaanka sitoos. Waxaad ka Qoranaysaan kartaa muraayada ama qodo aagga jikada ah, complete la fadhiga, haddii aad tahay qof si dhiiran.
Waxaa laga yaabaa in ka yar si fiican u yaqaan waa in majarafad ah ku yimaado anfacaya for qodayaa baraf cusub ku dhalaali waayo, biyaha la cabbo. Billadaha la dhalada biyaha ama gacmaha aad sidoo kale ka shaqeeya, laakiin tani waxay si deg deg ah uu helo daal iyo qabow.
Dabcan, majarafadihii backcountry sidoo kale kaa caawin karaan inaad qodo baabuurkaaga trailhead ama miciinka ski ah.
Adeeganaya Majarafad Snow a
Sababaha ugu muhiimsan marka shopping falin ay ku dheeli saxda ah ee xoogga lahaa, miisaanka, daab size / qaabka iyo raaxada xajin.
majarafadihii Backcountry loo sameeyay in ay noqon labada xoog leh oo fudud:
aluminium 6000-taxane waxaa inta badan loo isticmaalaa fallaadhihii oo gacaf iyo garbaha. In kastoo caag ah waa xumbo, aluminium bixisaa, xoog iyo cimri dherer loo baahan yahay si loogu isticmaalo xaaladaha degdegga ah.
Mid ka mid ah design gaar ah, cidida Snow ah, wuxuu isticmaalaa polyetylen-cufnaanta sare (HDPE) si kor lagu soo giringiriyey karo iyo ku kaydsan gudaha pack. model super-light Tani waa ka badan faa'iido u kaambada baraf badan waa goobta gebiyo.
Size daab iyo Qaab
tirada daab kala duwan yihiin inta u dhaxaysa lagu daydo. garbaha waaweyn waa weyn oo si deg deg ah u dhaqaaqin barafka, laakiin waxay u baahan tahay xoog badan oo si dhakhso ah aad laysan laga yaabaa. garbaha yar sahlan in ay la tacaalaan oo laga yaabaa in laguu ogolaado in aad si gurayso sida ugu dhaqsaha badan muddo dheer.
muuqaalo daab sidoo kale way kala duwan yihiin. garbaha Flat yihiin ugu wanaagsan ee la abuurayo derbiyada baraf-god siman, qarkiisa ah daab serrated caawisaa dhaceen ilaa baraf.
majarafadihii backcountry badankood waxay leeyihiin telescoping ama fallaadhihii segmented for lifaaqaaya fududahay in aad pack. Waxay wada ku haboon la badhamada guga-raran yihiin in arbushin galay godad ku yaala qaybaha isku xidha.
Gacanta, caadi ahaan laga sameeyey caag for xajin fudud, ku yimaadaan noocyo kala duwan oo qaabab:
The T-xajin, kaas oo la qabsadey faraha dhexdooda, waa miisaanka yar oo ka shaqeeya iyo sidoo kale inta badan dadka. Qaar ka mid ah waxaa laga yaabaa in la helo waxa sirgaxan markii xiran mittens ama overmitts.
The D-xajin waa sida caadiga ah bulkier iyo wax yar ka culus. Waxay bixisaa design wax ku ool ah oo inta badan waa fudud si ay u isticmaalaan la mittens.
The L-xajin waa ku yar yahay, laakiin waxa ay bixisaa fursad khafiifa garabaka xamili nadiifiye vaccuum ah.
Dooro gacanta ku habboon si raaxo leh in aad gacmahaaga.